आमा बाबा नै हाम्रो भगवान हुनुहुन्छ । :: Nepal Post Dainik आमा बाबा नै हाम्रो भगवान हुनुहुन्छ । | Nepal Post Dainik
आमा बाबा नै हाम्रो भगवान हुनुहुन्छ ।
January 20, 2020 मा प्रकाशित
सचिता सिहं लहान । आमा, बाबा जसले हामीलाई जन्म दिनुहुन्छ, हुर्काउनुहुन्छ, हिम्मत दिनुहुन्छ, वहा नै हाम्रो भगवान हुनुहुन्छ । ढुगाँलाई जल चढाउनु, मुर्तिलाई दुद्ध चढाउनु, मन्दिरमा देउता बस्छ भनेर ठुलो भुल भुलैयामा परेछौँ ।
आमा-बुबाले गरेका हरेक कुराको सराहना गर्नु आवश्यक छ । हरेक सुख दुःखमा सधैं हाम्रोको आमा-बुबा हामीसंगै उभिन्छन् । हाम्रो आमा-बुबाले हाम्रो लागि गरेका हरेक कुराहरु, जसलाई शब्दमा परिभाषित गर्न सकिंदैन, ती कुराहरुलाई सधैं हामीले महसुस गर्नु पर्छ । आफ्नो सम्बन्धमा सुधार ल्याउनका लागि हामीले आफ्ना आमा-बुबाका हरेक कामलाई कति सम्मान गर्नु हुन्छ भन्ने कुरा अनुभव गराउनु आवश्यक छ । यसले हाम्रो सम्बन्धलाई सुधार्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।
संसारमा यस्ता पात्र को होलान्, जो हाम्रो प्रगतिमा खुसी हुन्छन् । हाम्रो सुखको कामना गर्छन् । हाम्रो उन्नतीले प्रफुल्ल हुन्छन् । ति पात्र हाम्रो आमाबुवा हुन् ।
आमाबुवाले कहिले पनि छोराछोरीको कुभलो सोच्दैनन् । छोराछोरीको उन्नती, सुख र खुसीमा नै आमाबुवाले परम सन्तुष्ट हासिल गर्छन् ।
तर, आमाबुवाको भावनालाई छोराछोरीले बुझ्दैनन् । आमाबुवा के चाहन्छन् ? छोराछोरीले ख्याल गर्दैनन् । आमाबुवाले दर्शाउने माया, ममतालाई उनीहरुले लत्याइदिन्छन् । यही कारण छोराछोरी र आमाबुवावीच अहिले दूरी बढ्दो छ ।
हरेक सम्बन्धभन्दा माथि र अटूट हुन्छ, आमाबुवासँगको सम्बन्ध । यसलाई चाहेर पनि कसैले तोड्न सक्दैन । तर हिजोआज कतिपय छोराछोरीले आमा-बुबाप्रतिको आफ्नो कर्तव्यलाई बिर्सिंदै गएका छन् । त्यस्ता विभिन्न कारणहरु हुन्छन्, जसले गर्दा आमा-बुबासँग छोराछोरीको सम्बन्ध विग्रन सक्छ ।
आखिर कसरी आमाबुवासँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्ने ? कसरी आमाबुवाको भावनालाई बुझ्ने
आफ्नो आमा-बुबाको भावनालाई बुझ्ने प्रयास गरौं, जसका कारण तपाईं उनीहरुलाई खुशी प्रदान गर्न सक्नु हुन्छ । सन्तानबाट खुशी पाउनु आमा-बुबाको अधिकार पनि हो । तपाईले विभिन्न कुराहरुम सम्झौता गर्नु पर्ने हुन्छ, जसले तपाईंहरुको सम्बन्धमा सुधार ल्याउन सक्छ ।
यदि तपाईं आफ्नो आमा-बुबासंगको सम्बन्धलाई सुधार्न चाहनु हुन्छ भने तपाईंले उनीहरुसंग कुरा गर्नु आवश्यक हुन्छ । उनीहरु स्वयं आएर कुरा गरुन् भन्ने कुराको कहिल्यै पनि प्रतिक्षा गर्नु हुँदैन । तपाईंले आफ्नो आमा-बुबालाई आफुले कति माया गर्ने र आफुलाई उनीहरुको कति चिन्ता छ भन्ने कुरा बताउनु तपाईको कर्तव्य हो ।
यदि तपाइ आमा-बुबाको कुनै कुरामा सहमत हुनु हुन्न भने यसको बारेमा कहिल्यै पनि तपाईंको आमा-बुबालाई थाहा दिनु हुँदैन । त्यसो गर्नाले उनीहरुको भावनामा ठेस पुग्न सक्छ र तपाईंहरुको सम्बन्धमा सुधार आउनु भन्दा झन बिग्रन सक्छ । त्यसैले उनीहरुको हरेक कुरा र निर्णयको सम्मान गर्नु आवश्यक छ ।